Iindaba-Ukuphuhliswa kunye nokuPhuculwa kweMveliso yePhepha leSinyithi labaNxibelelanisi boMbane
NgoFebruwari 25,2020, iSebe leMarike eJitai Electronics Co, Ltd liququzelele intlanganiso yesiqhelo yentengiso, Kule ntlanganiso, sigqibe ekubeni siphucule izihlanganisi zombane ngokukhawuleza ukubonelela ngemarike yehlabathi ngezihlanganisi zombane ezikumgangatho ongcono kunye nexabiso elingcono.
Icandelo lethu lophando kunye nophuhliso lubonise ukuba izihlanganisi zombane zazisetyenziswa kakhulu kwicandelo leenqwelo moya / ngenqwelomoya, ngenxa yesidingo sobunzima obuncinci kwizixhobo ze-elektroniki, i-alloy aluminium ingxubevange encinci ibe zizinto ezibalaseleyo zebandla. kunye nokuchithwa okuhle kunye netekhnoloji evuthiweyo kwaye ingekho nzima kakhulu ukuba kungaphezulu kwaye kungabizi mali ingako kulungelelwaniso, ukuze inkampani yethu igxile kwisinxibelelanisi sombane esinye kuyo.
Siphumelele kwizisombululo kubunzima bobuchwephesha obune ngemigudu yeminyaka eliqela.
Umlingani we-1 wokwandiswa unokutshatisa iphakheji yealuminium kunye nokukhethwa kwezinto zokutywina ngeglasi insulators.
2.Small iglasi uphawu imingxuma wenza kube nzima ekuyileni insulators zeglasi kunye nokuqinisekisa ngaphandle ubukhulu ifanelana ukunyamezelana kwakunye ukuphakama ifaniswe imfuneko yokusetyenziswa.
3.Small lead pitch, eyandisayo yokwanda komlingani phakathi kwephakheji kunye nelothe inkulu kwaye uyilo lwendlela luphezulu.
4.The technology electroplating yelothe kukhokelela kunye imingxunya iglasi ezincinane
Ukuphuhliswa kwesinxibelelanisi sombane esenziwe ngeAluminiyam ingxubevange iya kuvula indawo yentengiso kwinkampani yethu ukuba ijoyine ibandla lepakethe yensimbi yesidibanisi sombane se-mirco kunye nokuphucula isikhundla kuyilo nakwindlela yokwenza izinto kushishino ngeli xesha liphucula inqanaba lophando lwenzululwazi kwiphakheji yokuhambisa umbane kunye yenza ulungiselelo lobuchwephesha kuphuhliso lwetekhnoloji kwinqanaba eliphezulu kwixesha elizayo.
IJitai Electronics Co, Ltd igcina izinto ezintsha ezingenasiphelo ukuze singaze siyeke amanyathelo anyukayo, sonke ixesha lokubonelela abathengi ngesisombululo esibalulekileyo njengolwalathiso lwethu lweenzame.Ukuhamba ngemizamo engapheliyo, siya kuba yinkokeli kwicandelo lesikhombisi sombane.